Isku Tiirsanaanta Dhirta iyo Xayawaanka |
Daily Telegraph: Obama oo dayacay hoggaanka caalamka Waddamada Galbeedna Khatar Weyn Geliyey ITukesomalism.com
Matahay Qof Jecel Wax Aqrinta?
Ilhaan Ciise Maxamed, February 23, 2019
Isku Tiirsanaanta Dhirta iyo Xayawaanka
Maxamuud Axmed Muuse — November 21, 2018
Waxa aan ognahay in xayawaanada oo dhan noloshoodu ay ku tiirsan tahay footosintasiska dhirta. Waxay cunaan cuntada ay dhirtu samayso, waxay neefsadaan ogsijiinta dhirta soo dayso. Nolosha dhulka dushiisa waa ay istaagi lahayd haddii aanay dhirtu jiri lahayn. Inta badan noolayaasha kale oo dhan waxa ay si toos ah iyo si aan toos ahaynba ugu tiirsan yihiin cunto ahaan dhirta iyo iyaga dhexdooda oo isku tiirsan cuno ahaana iska raadiya.
Tusaale ka mid ah isku tiirsanaanta:
Shinnida ma caawisaa faxlidda ubaxleyda?
Ubaxlaydu ma ku caawiyaan shinnida in ay samayso malab?
Isku tiirsanaantu macnaheedu waa habka ay nooleyaashu midba midka kale ugu tiirsan yahay si ay u noolaadaan, ukoraan una tarmaan. Tusaale ahaan: Shinnidu waxa ay nolosheedu ku tiirsan tahay faxalka iyo dhabaqa ubaxleyda, ubaxleydana waxa faxliddoodu ku tiirsan tahay shinnida. Haddaba, shinnida iyo ubaxleyda midba midka kale ayuu ku tiirsan yahay.
Qorraxdu waxa ay bixisaa tamar dhammaan nooleyaasha dhulka guudkiisa jooga ay ku noolaadaan. Quud sameeyayaasha (dhirta cagaaran) waxa ay tamarta ilayska qorraxdu u rogaan cunto. Dheefsadeyaashuna (xayawaanka) waxa ay isla wadaagaan tamartaan iyaga dhexdooda marka ay dhirta cunaan iyo marka ay iyaga is-cunaan. Qulqulka tamarta ee min-quudsameeyayaasha ilaa dheefsadayaasha ayaa waxaa ka dhasha silsilado cunto iyo shebekado cunto.
Tusaalooyinka silsilada cuntada:
Tani waa silsilada cuntada ee dhacda marka uu xooluhu cunaan dhir, dadkuna sii cuno xoolaha. Falaadhuna waxa ay ku tusinayaan sida ay isku quudanayaan noolayaasha sare. Waana habka laysugu tiirsan yahay oo midba midka kale ugu tiirsan yahay. Waxaa lamida tusaalooyin farabadan sida kuwa kor ku xusan oo kale.
Eeg tusahaan sare, waxaa markii ugu horaysay baxay geed caws ah, markii uu baxayna waxaa cunay jirriqaa oo cunto ka dhigtay ileen geedku waa quud sameeyayaale, noolaha daaqana waa dheefsadayaal. Markii uu jirriqaagii cunay cawskii, waxaa isna beddelay oo jirriqaagii laftirkiisii cunay mas, maskiina waa qaybka mida xamaaratada, waxa uu cunaa jirriqaaga. Maskiina waxaa cunay dafo, oo kamidda haadda samada sare duusha.
Dhammaan silsiladaha cuntadu waxa ay ka bilowdaan dhirta cagaaran. Sababta oo ah waa quud-sidayaal, xiriirka kale ee silsiladdu waa dheefsadayaal. Noolayaasha bilaaba silsilada cuntada waa kuwa tiro badan, halka xayawaannada ugu dambeeya silsiladdu ay yihiin kuwo tiro yar oo waaweyn. Arrinkaan waxaa lagu magacaabaa ahraamka cuntada.
Nolaha ku yaalla xagga hoose ee ahraamka cuntadu waa dhirta, waxaana lagu magacaabaa quud-sameeyayaal. Xayawaannada cuna dhirta waxaa lagu magacaabaa dheefsadayaal kowaad, tusaale ahaan: Ariga iyo jirriqaaga. Xayawaannada ugaarsada kuwa dhirta cuna waa dheef-sadayaasha labaad, tusaale ahaan: Dadka iyo maska. Xayawaannada cuna xayawaannadii dhirta quutay waa dheef-sadayaasha saddexaad.
Tags: Isku Tiirsanaanta Dhirta iyo Xayawaanka
Next post Shabakadda Cuntada Xayawaanka
Previous post Kala Abla-ablaynta Dhirta